‘सुस्त गति’को इन्टरनेटले हैरान हुनुभएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस् – Saurahaonline.com
‘सुस्त गति’को इन्टरनेटले हैरान हुनुभएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
चितवन, ०१ असोज । अहिलेको समयमा सूचना–प्रविधि हाम्रो जीवनका लागि अभिन्न अंग बनिसकेको छ । त्यसमा पनि मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेटजस्ता कुराबिना हाम्रा दैनिक कार्य नै अपूर्ण हुन थालिसकेका छन् ।